GEEDO KORAYA EE LAGU KORIYO AH. DOORASHADA AQALKA DHIRTA LAGU KORIYO EE CAGAARKA, KHUDRADDA, QARAHA, RADISHES, EGGPLANTS IYO UBAX - DHISMAYAASHA
Greenhouse - kaaliye aamin ah ee beerista strawberries, radishes, watermelons iyo khudaarta
Milkiilaha aad ku nooshahay 6 hektar ama dhul adag, halkaasoo aad qorshaynayso inaad qabanqaabiso ganacsigaaga koritaanka iyo iibinta alaabta beeraha, su'aasha ah doorashada noocyada koritaanka iyo geedo, iyo khudaarta hore ayaa kor u kici doona.
Beeraha dhirta kala duwan ee beerta furan, gaar ahaan aagga beeraha halista ah, waa mid aan la saadaalin Karin. Haddii ay suurtogal tahay in lagu rakibo hal ama dhowr koronto oo deggan, milkiilayaashooda ayaa laga yaabaa inay nasiib u yeeshaan naftooda.
Si kastaba ha ahaatee, ka badan inta badan bannaanka iyo bannaanka u door bidaan yar yar, fududahay in la sameeyo iyo beeraha dhaqaalaha, taas oo laga dhigi karo alaabo qashin ah.
Dhaqaaq kasta wuxuu leeyahay aqalka dhirta lagu koriyo.
Ku dhawaad ​​dhammaan dhaqamada waxay ku habboon yihiin koritaanka lagu koriyo. Ka dib oo dhan, eggplants, qaraha, basbaaska iyo yaanyada - Southerners, kuwaas oo aan u dulqaadan heerkulka hooseeyo, dilaan geedo xitaa dhaxan yar yar. Marxaladda koowaad daboolida filimka ayaa looga baahan yahay si loo ilaaliyo microclimate joogto ah. Waxay ka caawin doonaan dhirta inay ka ilaaliyaan roobabka, dhoobada iyo soodhada, dhaxan xilliga dayrta.
On our site waxaa jira maqaalo ku saabsan noocyada kala duwan ee lagu koriyo: Accordion, Innovator, Dayas, Gherkin, Snail, Box Bread.
Waxay ku habboon tahay in ay ku koraan khudradda badan ee lagu koriyo filimka, sanduuqyada daboolay foornada leh polyetylen ama muraayad, tunnel.
Tunnellada Cagaaran laga soo aruuriyay ars, kuwaas oo la dhigo fogaan ah 1, 5 mitir midba midka kale. On kuwaas arsaasada si adag u adkeeysan duub bac.
Ridges ee lagu koriyo sida waxaa laga sameeyey isku dar ah humus iyo digada, caleenta, kaas oo, gumeysi, diiriya xididdada dhirta iyo hawada ka yar filimka. In mini - noocan oo kale ah - lagu koriyo waxaa wanaagsan in ay koraan qajaarka, yaanyada yaryar, zucchini, squash.
Sanduuqyada ayaa sidoo kale ka buuxsamay digada waxayna ku daboolan yihiin muraayadaha leh dhalooyinka ama filimka ku habboon koritaanka yaanyada, basbaaska.
Celcelis ahaan, isticmaalka filimka ama miraayadaha qoryaha ah ee muraayadaha ayaa yaraynaya muddada ay helayaan dalagga ugu horreeya 3 toddobaad, mararka qaarkoodna 1 bil.
Wareeysiga Dhamaadka Maajo - Juunyo, jaangooyooyinka ayaa laga furay hal ama labada dhinacba. Maalmaha kulul, filimka ayaa la gooyaa gebi ahaan ama badh, oo khudradda ku daboolaya habeenkii. Qeybta labaad ee Luulyo - Agoosto, daboolka filimku wuxuu ilaalin doonaa dhirta laga bilaabo duufaan qabow oo si diiran u ilaali. Xitaa dhamaadka bisha Agoosto waxaad awoodi doontaa inaad ku darsato qajaarka yar yar iyo zucchini.
Mid ka mid ah dhaqamada ugu badanu baahan baahida ilaalinta - eggplants. Ciidda ee lagu koriyo waa in la diyaariyaa dayrta.
Ka dib markii ay ka saareen lakabka sare ee carrada ee 0, 5 - o, 8 mitir qoto dheer, in qaxayo dhigo posts, kuwaas oo ku xiran guddiga. Waxaa lagugula talinayaa inaad sameyso darbiyo labajibbaaran.in kuleylka ka dhigo mid ka fiican. Ka dib markii ay ka saareen hadhaaga dushooda, caws iyo caleenta sanduuqa, qodo ciidda.
Si fiican u daadi biyo iyo jeermiska: 100 gaas oo mitir ah, ama shaandhada, 250 garaam oo xal boqolkiiba 40 ah kaas oo lagu qasi karo 10 litir oo biyo ah iyo daadi dhulka, halkaas oo ukunta dhallinyarta koraan.
Tallaabooyinkani waxay kaa caawin doonaan inaad ilaaliso dhammaan geedo.
Horeba bilaha Febraayo - Maarso, xafladaha waxay ku beeri karaan miraha eggplants ee xanaanooyinka xannaanada. Wixii 2 - 3 toddobaad ah ka hor inta beerto in lagu koriyo, heerkulka qolka ah geedo koraan, waxaa la yareeyay 15 - 18 digrii. Wixii todobaad ah ka hor inta aan la beeri, waxay ku quudinayaan Bacriminta organic, loola dhaqmo cudurada iyo cayayaanka. Waxaad isticmaali kartaa dareeraha Bordeaux, waad faa'iidi kartaa.
In lagu koriyo karo eggplant lagu beeray karaa tobanka sano ee hore ee June. Haddii kuleylka qorraxda la iftiimiyo, ciidda waa la diiriyaa, waxay si caadi ah u dhaafi doonaan kulaylka.
Eggplant diyaar u ah inuu dego marka dhirta ay gaarto 20 sentimitir, waxay horay u koray 5-7 caleemo.
Qeybta hoose ee aqalka dhirta lagu koriyo hal toddobaad ka hor beerashada geedo, digada waa la shubay, ka dibna lakabka dhulka. Dusha sare ee aqalka dhirta lagu koriyo ayaa la jajabiyay polietilen. In lagu koriyo sida, dhirta u koraan iyo si fiican u horumariyaan: haddii loo baahdo, mariwaashu waa sahlan tahay in la qaado ama furo hawo.
Waa lagama maarmaan in la qodo oo si wanaagsan loo daboolo ciidda.
Ceelasha qoto dheer leh 16 - 20 sentimitir ayaa laga sameeyey fogaan ah 40 - 50 sentimitir midba midka kale. Waxaa fiican inaad ku beeri geedo isku xigta, laakiin haddii aad go'aansato inaad meel dhigato, waxaad abuuri kartaa eggplants qaab habeysan, sii kordhaya masaafada 10 sintimitir.
Si xoog leh u dhaq geedo 3 saacadood ka hor qaliinka, tani waxay kaa caawin doontaa inaad ka fogaato burburka nidaamka xididka.
Biyo diirran ayaa lagu shubay ceelashaka dibna si taxadar leh u duurka ku rid, kula saydhaa leh ciidda.
Qalitaanka ka dib, waxaad u baahan tahay inaad ku quudiso seedling kasta.
Eggplantada cagaaran ayaa ka sarreeya kuwa ku koray dhulka banaan, sidaas darteed, markay koraan waxaad u baahan tahay inaad xirto. Biyaha dhirta si taxaddar leh, sida nidaamka xididka ayaa ku yaal meel u dhow dusha. Waraabinta maalin walba, hawo qaadashada, quudinta 3-6 goor bishii - iyo dalagga ayaa ku farxi doona.
Talo: Haddii dhirta aan la filayn ay ku dhuftey, baaldi kulul oo leh dhuxul kulul ayaa lagu tuuri karaa aqalka dhirta lagu koriyo, ukumaha, 5-10 litir oo balaastiig ah oo biyo kulul ah ayaa hoos loo dhigi karaa oo si adag u xiran. Heat waxaa lagu kaydiyaa ilaa 1 maalin.
Kordhi basasha hoos filimka aad u fudud Waxaad isticmaali kartaa daboolka filimka ugu fudud, iyo qaabka la saari karo aqalka dhirta lagu koriyo, iyo sanduuqa.
Goosashada hore qalinka cagaaran waxaa laga heli karaa adoo beeraya basasha dayrta. Basasha si fiican ayey u koraan meelaha ay bataatada, yaanyo ama beetroot ay ahaayeen kuwii horay u ahaa.
Haddii aad ku beerato qalimaan qasab, waxaad soo saari kartaa sevok midba midka kalehaddii aad u baahato beertku beeraan meel fog 25 - 30 sentimitir midba midka kale. Marka lagu dhammeeyo beeritaanka, daboolo sariirta leh lakabka peat, laamood, filim. Dabayaaqadii bishii Maarso - horraantii Abriil, hoyga waa laga saari karaa, sariiraha waa in si fiican loo waraabiyaa oo daboolaa muraayadaha, polietilen ama polycarbonate.
Boodh cagaaran oo buuxa ayaa laga jari karaa 3 ilaa 4 toddobaad kadib.
Haddii aad gasho basasha guga hore, waxaad soo goosan doontaa miraha ugu horreeya ee bisha May ama horraanta Juun. Ha iloobin inaad basbashid basasha, iyaga ku quudiya kuna rux maalmaha diiran.
Aad u fudud si ay u koraan kaabajka cagaaran. Si aad u hesho goosashada weyn, waxaad u baahan tahay inaad daryeesho geedo. Seeds of noocyo bislaado hore ee kaabajka lagu beeray sanduuqyada seedling leh iftiin, ciidda hodanka ah organic hodan ah bartamihii February.
Waa muhiim: Waxaa ugu wanaagsan in la beero abuur weyn oo caleemaha xoog leh.
Wixii sii kordhaya ee kaabajka aqalka dhirta lagu koriyo ayaa ugu fiican inay isticmaalaan lagu aasay sanduuqa dhulka oo leh derbiyo dildillaacaya oo labajibbaaran, awood u leh inay si fiican u hayso kuleylka oo aan u oggolaanin ciidda in ay u burburiyaan dhirta. Dabayaaqadii Bishii Maarso - horraantii Abriil, waxaad u baahan tahay inaad ka baxdo barafka, hubi xaalada muraayadaha oo aad dabooli doonto aqalka dhirta lagu koriyo.
Ka dib markii muuqaalka ah ee geedo caleen ugu horeysay u baahan yihiin hoos u dhig, oo ku fadhiya meel fog oo ah 5 - 10 sentimitir midba midka kale.
Greenhouse buuxi bioorganic, kaas oo, marka la gooyo, si fiican u kululaanaya ciidda. Top ku shubay isku dar ah humus sodan, ciidda madow iyo dhulka. Marka heerkulka aqalka dhirta lagu koriyo yahay 20 darajo, waxaad samayn kartaa koobab la caleemahaaga, siinaya dhirta si loo isticmaalo mikroclimate cusub ka hor inta aadan ku tallaalin. Laakiin qaar badan oo kaabaja beeray isla markiiba ciidda.
Masaafada inta u dhaxaysa geedo waa in aysan ka yarayn 5 sentimitirhaddii aad qorsheyneyso inaad ku beerato kaabajka dhulka. Haddii ay soo baxdo filimka, masaafada u dhaxaysa waa inay ahaataa 40 - 50 sentimitir.
Waraabinta waxay ubaahantahay daryeel gaar ah: waxay u baahan yihiin in ay qoyaan ciidda oo dhan, ku shub 1-2 litir geedka kasta, ugu yaraan saddex baaldiyo oo biyo ah halkii mitir labajibbaaran. Laakiin waqti isku mid ah hubi in biyaha ma dhicin on caleemo, sidaas darteed ciidda u dhow saldhigga of afkoda aan la maydhay. Ha ku shubin biyo dhan isla markiiba, hubi in si buuxda loo nuugo. Waraabin badan - 1 mar 10 - 15 maalmood. Haddii cimiladu tahay qorrax iyo diiran, waraabinta kaabajka ayaa lagama maarmaan ah 3-4 cisho kasta, ka hortagaya ciidda in ay qalajiso.
Madaxda ugu horreeya ee kaabash cad oo leh habkan beerashada waa la gooyn karaa horeba bartamihii July.
Kaabashka Beijingkaas oo, koritaanka fiican iyo da 'sii da', waxay u baahan tahay heer sare oo qoyaan ah, heerkulka hawada laga bilaabo 15 ilaa 25 darajo iyo iftiin badan, si fiican u koraan sida lagu koriyo - tunnel, iyo sanduuqyada. Inta lagu jiro xagaaga hal site waxaad heli kartaa laba, ama xitaa saddex dalag. Noocyada hore ayaa la beeray in lagu koriyo oo ka yar filimka badhtamaha April, noocyada kala duwan ee Bisaylkiisa - bartamihii June. Kaabashka Beijing u istaagaya qaboojinta hoose ee eber, sidaas darteed waxaad ka saari kartaa in lagu koriyo ah ee bartamihii October.
Waa muhiim: Marka la kordhiyo tayo fiican iyo broccoli ee lagu koriyo, waxaad u baahan tahay inaad xasuusnaato in ay Ha jeclaan kuleyl aad u badan. Marka heerkulka hawadu kor u kacdo ilaa 25 digrii, ma aha oo keliya furo aqalka dhirta lagu koriyo, laakiin sidoo kale biyo ku dhexjirta maalintii si loo yareeyo heerkulka, buufin.
Quudinta loo baahan yahay dhirta, si loo joojiyo koritaanka: hal toddobaad gudahood 7-10 maalmood, hubi inaad waraabiso Kaabashka leh xalalka HOL ee heerka 2 qaado oo baaldi biyo ah, Bacriminta organic. Dhaqamadaasi waxay si wanaagsan uga jawaabaan bacar saarista shimbiraha, la qasiqiyay 1:20 biyo.
Si aad u koraan dabocase ee lagu koriyo aad u baahan tahay dooro meesha ugu quruxda badan - Warshadu uma dulqaadanayso la'aanta qoraxda.
Beeray lagu koriyo, xididdadaas waxay noqon karaan horraantii Abriil. Waxaa ugu fiican loo isticmaalo beerto abuurka ugu weyn sida dabocase ka koray kuwa yaryar had iyo goor hadana wuu haystaa.
Radishes lagu beeray karaa 25 maalmood kasta, iyo laga bilaabo bartamihii August, cover filimka waxaa loo isticmaali karaa mar kale si ay u soo gurtaan dalagga ilaa dayrta goor dambe.
Waa muhiim: Ku beerta koriyo oo kaliya bisha Abriil noocyo hore u bislaaday. Qodobka xaddidan ee soo-saarka beerashada bisha Agoosto.
In cagaarka aqalka dhirta lagu koriyo ayaa la kori karaa bilowga May. Dill, lettuce, watercress, garbaha, dhir ma ka cabsanayo dhaxan. Waxaa suurtagal ah in lagu beero cagaarka ee aqalka dhirta lagu diyaariyo xilliga dayrta bilowga Abriil. Daboolka filimku wuxuu ka ilaalin doonaa qabow oo ha kululaado. Ha ilaawin inaad waraabiso geedo, si hawo lagu koriyo oo loo dhigo maalmo qorrax leh. Waqtiga dhismaha loo baahan yahay dalagyo kale, cagaarka ayaa horay u soo muuqan doona berrinka bannaan, laakiin gudaha 1 - 1, 5 bilood oo ah aqalka dhirta lagu koriyo, sida caadiga ah, waafaqsan bisha Abriil - Maajo, waxay faa'iido u tahay, ku faraxsanaanta fiitamiinada koowaad.
Filmka caadiga ah wuxuu ku faafay geeska Xagga sare ee sariirta ama sariirta salaada ah ayaa siin kara hoy, kaas oo sidoo kale kaa caawin kara helitaanka goosashada goor hore.
Goobaha Filimada iyo Guryaha marka koraan ubaxyada loo baahan yahay si ay dhirta degdega ah ma baabbi'iso midhaha shaqooyinkaaga.
Inta badan si loo ilaaliyo geedo ubaxyada iyo dhirta horay u dhistay dhirta Guryo lagu dhiso tunnelfilimka ku riixaya qulqulka khatarta dhaxan.
Guryaha noocan oo kale ah waxay kuu oggolaanayaan inaad dardar geliso koritaanka geedo, si loo soo qaato waqtiga ubaxa.
Tulips, daffodils, xakameynta, viola iyo kuwo kale oo badan ayaa ku farxi doona ubax bil ka hor haddii ay koraan oo lagu koriyo - sanduuqyada iyo xitaa filimka kaliya.
Si loo qiyaaso shuruudaha midhaha miraha ee dalaggu wuxuu ka caawin doonaa tunnelka, filimkaas oo si fudud loogu qaadi karo hawo-qaadashada. Badanaa, marka ay sii kordheyso strawberries ee lagu koriyo, la gooyey oo la isku xidha ayaa loo isticmaalaa si joogto ah loo cusbooneysiiyey.
Qeybaha kor ku xusan waxay ku jiraan dabaqyo, taasoo u oggolaanaysa in qorraxda qorraxda ay u diiriso hawada intii suuragal ah. Bishii Maajo, shaxanka waxaa loo qaadi karaa hawada, waraabinta - strawberry jecel yahay qoyaan.
Guryo dhoobo ah waxay dhigeen sariiraha leh strawberries horeba bishii April, dhexe ee July waxaa filimka laga saari karaa, in bartamihii July - August filimka ku saabsan noocan oo kale ah aqalka dhirta lagu koriyo mar kale soo gali karo.
Xilliga xagaaga qaboobaha goobaha khatarta ah ee beeraha strawberries ee lagu koriyo ku dhow yihiin had iyo jeer hoos cover, dhirta yar-yar ee koraysa uma baahna qadar ballaadhan oo dabool ah.
Sariir sarreysa oo bac ah oo bac ah oo dabiici ah, ku daboolan sanduuq leh derbi alwaax ah ayaa lagama maarmaan u ah geedo lagu guuleysto iyo qarashka watermelons ee lagu koriyo.
Foormyo leh dhalo ama filim qaro weyn ayaa ilaalin doona dhaqanka niyadda ah laga soo bilaabo dhaxan guga. Sida dhaqanka ubucda koraya, dhererka hoyga si fudud ayaa loo bedeli karaa iyadoo la adeegsanayo ars, kaas oo lagu rakibay ciidda fogaan ah 1 illaa 1.5 mitir.
Biyaha carrada lagu koriyo 1 jeer 3 - 4 maalmood. Marka calaamadaha koowaad ee waraabinta miro sii kordhaya.
Xusuusnow in haddii aad ku beeray geedo aad u qaro weyn, isku dayaya in meel lagu badbaadiyo, tirada ugxansiisku waxay noqon doonaan kuwo ka sii badan, laakiin miraha naftooda - way ka yar yihiin. Masaafada u dhexeysa waa 40 ilaa 60 sentimitir.
Waa muhiim: Watermelons kaamil ah ha u dulqaadan caws, Sidaa darteed, ma aha oo kaliya waraabinta, loosening iyo dhar xidhashada, laakiin sidoo kale jaridda joogto ah ayaa loo baahan yahay goosashada.
Interesting: joojinta waraabinta waraabinta 3 - 4 toddobaad kahor maalinta goosashada iyo dib u soo celinta daboolka filimka, sidaa darteed roobku ma qoyaan sariirta beerta, caawinaad hesho ma aha oo kaliya si fiican u qumman, laakiin sidoo kale miro, macaan, macaan.
Ku habboon geedo nooc kasta oo lagu koriyo. Aad bay muhiim u tahay in la hubiyo in helitaanka geedo ay ku haboon tahay.
Waxaa fiican inaad horay u dhistay dhirta quudinta ee lagu koriyo, lagu duubo koobab.
Si joogta ah u furan lagu koriyo ee guga aan loo baahnayn sababtoo ah waxaa jira khatar hypothermia geedo. Iyadoo nidaamkan, geedo waqtiga loogu talagalay waraabinta iyo bacarimiso waxay qaadataa wax ka yar markaad abuurto dhulka.
Si aad u beertid on sariiraha diiran ee hoyga meel joogto ah ugu fiican qajaarka, watermelons, zucchinikuwaas oo aan jeceln in lagu bedelo.
Si taxadar leh u dooro goobta doorashada ee loogu talagalay aqalka dhirta lagu koriyo, waa in uu jiraa qorrax cad oo badan si ay geedo aan la foorarin, oo leh dherer dheer oo caws ah.
2-ta sano ee ugu horeeya ee lagu koriyo si fiican ma u furan tahay. Kaliya haddii ciidda si lama filaan ah u noqoto mid aad u qalalan, taas oo si cad loogu arki karo filimka iyo dhalooyinka, u fur furfuran si aad u waraabiso. Ka dib markii 20 - 25 maalmood, waxaad quudin kartaa dhirta, ku shub dhulka dhulka hoostiisa, oo kor u qaadaya heerka 5 centimitir.
Marka heerkulku bilaabmo inuu kaco 18 ilaa 20 digrii inta lagu jiro maalintii, waxaad bilaabi kartaa hawada, adkaynta geedo: marka hore u furan 10 - 20 daqiiqo, si tartiib tartiib ah u kordhiyaan waqtiga 3 ilaa 4 saacadood.
Ka hor inta beerto geedo, ciidda ee aqalka dhirta lagu koriyo ayaa si badan loo waraabiyo si aanay u waxyeeleynin xididada marka qodaya.
Guryaha aqalka dhirta fudud oo fudud oo fudud ayaa bixiya gargaar muhiim ah beeralayda iyo milkiilayaasha dhulalka waaweyn. Iyada oo xulashada saxda ah ee model ah oo lagu koriyo, meesha ay meeleynta iyo qalabka wax lagu daboolo, waxay si weyn u yareeyo khatarta ah barafka, dhimashada geedo iyo dhirta yaryar, waxay kordhiyaan wakhtiga ay fruiting, ka caawiyaan helitaanka goosashada goor hore ee cagaarka, iyo khudradda iyo berry.